Efitrano fandraisam-bahiny manokana natokana tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Maputo
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Efitrano fandraisam-bahiny manokana natokana tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Maputo
Ny National National Mozambique (FNB) sy ny National Aviation Services (NAS) vao haingana dia nanokana efitrano fandraisam-bahiny manokana misy ankehitriny ao amin'ny terminal International an'ny Maputo International Airport. Ny FNB Lounge avy amin'i Pearl Assistant dia manolotra toerana maoderina sy manja manome vahinin'ny olona tontolo iainana hilamina sy hiala sasatra, hisakafo na hahatratra ny asa alohan'ny hiaingany amin'ny diany mandroso.
Ny FNB Lounge nosoratan'i Pearl assist, dia notokanan'ny jeneraly João Martins de Abreu, filoha lefitra ary tompon'andraikitra ambony, Ivotoerana misahana ny fiaramanidina sivily Mozambika, Emanuel Chavez, filohan'ny Aeroportos de Moçambique (ADM), Paulo Pereira, tale jeneraly lefitry ny FNB Mozambika sy David Henderson, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra ao amin'ny vondrona NAS.
Miara-miasa amin'ny NAS Pearl assist, ny efitrano malalaky ny FNB dia miorina eo amin'ny rihana voalohany amin'ny seranam-piaramanidina Maputo International Airport ary manome ny mpanjifa Platinum sy Black Card Limited an'ny FNB sy First Rand. Ireo mpihazona karatra dia afaka miditra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny fanolorana carte de crédit FNB na First Rand manan-kery na pass international boarding.
Ny efitrano fandraisam-bahiny FNB 250 metatra toradroa noforonin'i NAS, dia mirakitra ny endrika sokajy manerantany sy ny toetoetran'ny toeram-pialamboly zavakanto ho fampiononana ny vahiny rehetra. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia afaka mandray vahiny 55 amin'ny fahaizany feno. Miaraka amin'ny karazan-tsakafo sy zava-pisotro mafana sy mangatsiaka, Wi-Fi maimaim-poana, ivon-toeram-pivarotana, fantina famakiana boky, trano fandroana ary toerana fialamboly misaraka ho an'ny ankizy, ny FNB Lounge dia natao ho lohalaharana amin'ny fandraisana olona. .
Ny NAS amin'izao fotoana izao dia miasa any amin'ny efitrano fiasana 31 manerana an'i Afrika, Moyen Orient ary Azia, amin'ny seranam-piaramanidina lehibe any amin'ny firenena toa an'i Koety, UAE, Egypt, Morocco ary Rwanda.
Henderson dia nilaza hoe: "Faly izahay fa miara-miasa amin'ny FNB hanokatra ny efitrano fandraisam-bahiny voalohany misy azy ao amin'ny Airport International Airport. Rehefa hitantsika ny fitomboan'ny fampiasam-bola vahiny miditra amin'ny firenena, dia zava-dehibe kokoa ny manolotra fotodrafitrasa manerantany ho an'ireo mpandeha an-toerana sy iraisam-pirenena. Miaraka amin'ny fahaizan'ny NAS amin'ny fitantanana ny efitrano fandraisam-bahiny, fampiasam-bola amin'ny loharanon-karena ary ekipa serivisy voafantina, dia azo antoka fa hanolotra ny mpanjifa FNB izahay, ary koa ny vahiny hafa izay tsara indrindra amin'ny resaka fampiononana sy rendrarendra. ”
Nanome toky i Pereira fa ny andrim-panjakanany dia manolo-tena mihoatra ny andrasana amin'ny indostria nefa mampifanaraka tsy tapaka.
Araka ny filazan'i Pereira, ireo mpampiasa efitrano fandraisam-bahiny dia tendrena ho mpitantana voatokana ho amin'ny fanampiana ary hahazo karatra tsirairay miaraka amina puce sy pin nomerazy manokana hanamorana ny fandoavam-bola amin'ny Internet. "Manohy mandalina ny tsenan'i Mozambikana izahay ary manontany" ahoana no ahafahanay manampy anao? ", Amin'ny ezaka fampidirana vokatra sy vahaolana vaovao kokoa amin'ny tsenan'i Mozambikana," hoy izy namarana.
Ny efitrano fialan-tsasatry ny vondrona FirstRand (anisany ny FNB Mozambika) dia efa misy any amin'ny firenena toa an'i Namibia, Zambia, Botswana ary Afrika atsimo ary natao ho tsara indrindra amin'ny fandraisana olona.
Ny fanokafana ny efitrano fandraisam-bahiny, dia ampahany amin'ny paikadin'ny famelomana sy fanavaozana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ary koa ny fametrahana ny orinasa vaovao, miaraka amin'ny teny filamatra hoe "out of the ordinary bank". Ity dia vokatry ny fametrahana toerana vaovao an'ny FNB Mozambika, mikendry ny hanomezana fampiononana, fahafaha-manao ary hatsarana bebe kokoa, ho tonga tahaka ny andrim-panjakana banky manavao ary vonona hamorona vahaolana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifany.
Nahazo 10 taona an-tranomaizina i cabbie Istanbul noho ny nandroahany ny mpizahatany
Etihad Airways, ISIS, Israel Defense Forces, ary Australia: Tantara momba ny fiaramanidina mipoitra